Swordigo 1.4.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.4.1 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား စြန္႕စားခန္း Swordigo
Swordigo ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Run, ပလက်ဖောင်းစိန်ခေါ်မှုများတစ်ကျယ်ပြန့်ကမ္ဘာအားဖြင့်သင်တို့၏လမ်းခုန်ခြင်းနှင့်လျှော့ချကာမော်ကွန်းစွန့်စားမှုအပေါ်စတင်! အန်းဒရွိုက်ဖုန်းများနှင့် tablet များအဘို့ယခုလည်းရရှိနိုင်အဆိုပါ # 1 မိုဘိုင်းစွန့်စားမှုဂိမ်းနှင့်တစ်ဦး 3D platform ။
"Swordigo အတိတ်၏ platform နှင့်စွန့်စားမှုဂိမ်းတစ်ခုချစ်ခြင်းမေတ္တာစာတစ်စောင်ဖြစ်၏။ " - SlideToPlay, 4/4
"သင်ပလက်ဖောင်းအကြားခုန်နှင့်ရန်သူများကိုတစ်ကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်ဆန့်ကျင်သင့်ထားလျှော့ချအဖြစ်မှိုင်းလှုပ်ရှားမှုရှိတယ်ဘယ်တော့မှဖွင့်။ " - Apple'n'Apps, 4.5 / 5
"သင်ကသာယခုရက်သတ္တပတ်တစ်ဂိမ်းကိုဝယ်လျှင်ရိုးရိုးသားသားဆိုရရင်ကျ, သငျသညျ Swordigo ရှေးခယျြသငျ့တယျ။ " - AppAdvice
•ထောင်ထဲက, မြို့များ, ဘဏ္ဍာနှင့်ပွေမိကျောင်းတစ်ဦးမှော်ဘုံ Explore ။
• Gain အတွေ့အကြုံနှင့်အဆင့်အတန်းကိုတက်သင့်ရဲ့ဇာတ်ကောင်။
•တွေများလိုဏ်ဂူနှင့်ထောင်ထဲသို့ Venture အစွမ်းထက်သည် hidden ဓားရှာဖွေတွေ့ရှိရန်။
side-SCROLLER ပလက်ဖောင်း GAME
စမတ်ဖုန်းများနှင့် tablet များအတွက် optimized Precise ထိထိန်းချုပ်မှု•။
•သင့် preference ကိုမှထိန်းချုပ်မှုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။
Swordigo အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Swordigo အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Swordigo အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Swordigo အား အခ်က္ျပပါ
Swordigo ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Swordigo အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Touch Foo
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.iubenda.com/privacy-policy/674938
Release date: 2019-08-14 20:33:53
လက်မှတ် SHA1: A3:AA:25:17:04:B0:F3:69:3E:43:29:BC:49:0D:AB:6F:45:39:2B:57
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Ville Makynen
Swordigo APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ